Voina · Mey, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Mey, 2008
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Mey, 2008
Sodàna 23 Mey 2008
Shina: Horohorontany nahatratra ny hery 7.8 izay tsapa saiky manerana an'i Shina
Shina 14 Mey 2008
Tokony ho ora roa lasa izay, dia nisy horohorontany izay nahatratra ny hery 7.8 eo amin'ny metatry Richter [7,0-7,9 heverina ho toy ny horohorontany henjana izay mety mahatratra 18 isan-taona maneran-tany, sy ranomasina] izay nandona ny faritra Atsimo Atsinan'i Shina, dia ny faritanin'i Sichuan, izay tao amin'ny fivondronan'ny Wenchuan ny...
Shina : Horohorontany an-tsary
Nanagona sy nanapariaka andian-tsary mampiseho ny ny horohorontany vao nitranga tany amin'ny faritry Sichuan any Shina i ESWN [East South West North na Atsinanana Atsimo Andrefana Avaratra].
Maraoka 13 Mey 2008
Nisiana haintrano mahatsiravina roa tao an-drenivohitry ny toe-karena maraokana, Casablanca, tamin’ny faran’ity herinandro ity ka ny iray tao amin’ny orinasa mpanao kidoro ary ny faharoa kosa tao amina orinasa fanaovan-damba iray. Ampolony ny olona maty nandritra izany haintrano izany noho ny nanidian’ny mpampiasa ny toeram-piasana (avy any ivelany). Mitafatafa amin’alahelo sy fahatezerana noho io toe-javatra mahonena io no tontolom-bolongana Maraokana.
Myanmar: Milona ny asa famonjena
Myanmar (Birmania) 10 Mey 2008
Miakatra hatrany ny isan'ny maty tao Myanmar andro maro taorian'ny nandalovan'ilay rivo-doza mahafaty namely ny firenena. Razana maro no ariana (atsipy) any an-drenirano Tonga avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny fanampiana saingy ny fitondrana miaramila no mampanano-sarotra ny hetsik'ireo fikambanana mpanampy avy any ivelany. Miharatsy ny toe-draharaha rehefa ny sakafo sy ny fanafody no tsizarizary